तपाईंको वेबसाइटमा राम्रो ब्याकलिङ्कहरूलाई आकर्षित गर्न के हो?
म यस लेखमा नयाँ व्यक्तिहरू को लागि ब्याकलिङ्कको छोटो परिभाषाको साथ यो लेख सुरु गर्न चाहन्छु. एक पछाडि एक पृष्ठबाट अर्को हाइपरलिंक हो. नियमको रूपमा, लिङ्कमा पाठ सम्मिलित गरिएको छ र लङ्गर पाठ जस्तो देखिन्छ. यो पाठमा क्लिक गरेर, तपाईं व्याख्या लेख वा वेबसाइटमा यो सामग्रीमा उद्धृत गरिएको जान्छ. यस्ता लिङ्क सामान्यतया प्रयोगकर्ताहरूलाई उपयोगी जानकारी प्रदान गर्दछ र वेबसाइट वेबसाइट मालिकहरूलाई उनीहरूको वेबसाइट रेटिङ सुधार गर्न मद्दत गर्दछ यदि सबै कार्यहरू सम्पन्न भएमा.
यो लेखलाई तपाइँलाई कसरी सिकाउने डिजाइन गरिएको छ कि तपाईको वेबसाइटमा राम्रो ब्याकलिङ्क कसरी प्राप्त गर्ने. म तपाईंलाई सम्भव सम्भावित ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न र आफ्नो पहुँच वृद्धि गर्न आवश्यक उपकरणहरूको साथ हात लगाउन चाहन्छु.
सबै ब्याकलिङ्कहरू समान रूपमा सिर्जना गरिएका छैनन्. यसैले तपाईलाई सावधानीपूर्वक सावधानी दिनुपर्दछ जब तपाईंको साइटको लिङ्कहरू निर्माण गर्दछन्. नियमको रूपमा, ब्याकलिङ्कहरू दुई उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ. पहिलो एक वेबसाइटलाई गुणवत्ता लिङ्क रस प्राप्त गर्न र वेबमा ब्रान्ड प्राधिकरण बढाउन मद्दत गर्न हो. दोस्रो एक जान्दछ कि जानबूझेर प्रतिस्पर्धात्मक साइटहरूमा वा अनैतिक रूपमा तपाईंको लागि.
उच्च गुणवत्ता वाला ब्याकलिंक कसरी भेद गर्ने?
सामान्यतया, उच्च गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू जुन वेब साइटहरूको सर्वश्रेष्ठबाट आउँछन्. तिनीहरू प्रासंगिक र नैतिक रूपमा उत्पन्न हुन्छन्. अधिक व्यक्तिहरू जसले सर्वोत्तम गुण साइटहरूसँग जोड्दछ, अझ राम्रो यो साइटको खोजी ईन्जिनियरिङ्को लागि हो. Google ले यो लिङ्कहरू हेर्न र लिङ्क गरिएको साइट उच्च स्तर र राम्रो प्रतिष्ठाको साथमा इनाम दिनेछ. यो ठीक छ के तपाईं लिङ्क इमारतमा खोज्नु आवश्यक छ.
तथापि, मैले पहिले उल्लेख गरेको रूपमा सबै ब्याकलिङ्कहरू समान बनाइन्छ र पछि तिनीहरूका सबै भन्दा टाढा समान फायदेमंद छन्।. यसकारण वेबमास्टर्सहरू थाहा पाउनुपर्छ कि उच्च-गुणस्तरको ब्याकलिङ्क कुन हो?.
आउनुहोस् हामीलाई जैविक, उच्च गुणस्तरको लिंकलिङ्कको केही आवश्यक विशेषताहरू गणना गर्नुहोस्:
प्रमोटेड वेबसाइटको आलासंग सम्बन्धित; (1 9)
विश्वसनीय वेब स्रोत बाट आउछ; (1 9)
सन्दर्भ यातायात मा पठाउँछ; (1 9)
सही तरिका मा साइट को सामाग्री मा एम्बेडेड; (1 9)
यो भुक्तान वा पारस्परिक छैन; (1 9)
यो एक विज्ञापन जस्तो देखिन्छन; (1 9)
यसले तपाईंको PageRank योगदान गर्दछ. (1 9)
यस्ता उच्च गुणस्तर लिङ्कहरू कठिन छन्. यसैले तिनीहरू खोजी इन्जिन र प्रयोगकर्ताहरूद्वारा अत्यधिक सराहना गरेका छन्. यसबाहेक, तपाईंलाई विभिन्न स्रोतबाट यस्ता लिंकहरू प्राप्त गर्न आवश्यक छ, एक उच्च पीआर साइटबाट 100 ब्याकलिङ्कहरू. ध्यान राख्नुहोस् कि तपाई प्रणालीलाई धोकाउन प्रयास गर्दा Google ले सजिलै सूचना दिन्छ.
तपाईको साइटमा गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्ने सरल तरिकाहरू के हो?
तपाईलाई बुझ्नु भएको पहिलो कुरा भनेको ब्याकलिंकहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ, किन्नु हुँदैन. उत्तम लिङ्क निर्माण रणनीति कडा काममा आधारित हुनेछ, र यो सबै हो. निस्सन्देह, तपाईले समान समय लिङ्कहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ. तथापि, तपाई निश्चित हुनुहुनेछ कि यस्ता लिङ्कहरूले तपाईंलाई लामो समयसम्म सकारात्मक परिणाम दिनेछ.
गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न केही तरिकाहरू छन्:
सान्दर्भिक ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न, तपाइँ सजिलै आफ्नो नाम र जानकारी उच्च-गुणस्तर, मानव-सम्पादित निर्देशिकाहरूमा राख्न सक्नुहुन्छ।. यो हुन सक्छ कि तपाइँ यी केही निर्देशिकाहरूमा तिर्नुपर्छ. तथापि, कुनै पनि लिङ्क निर्माण सेवाको लागि बसोबास गर्नुभन्दा पहिले, तपाईंलाई निश्चित गर्न स्प्याम वेबसाइट होइन भनेर निश्चित गर्न आवश्यक छ. (1 9)
अर्को उपयोगी लिङ्क निर्माण प्रविधि अतिथि ब्लगर हुनु हो. आला सम्बन्धित लक्षित ब्लगसँग सहकार्य र त्यहाँ तपाइँका साइटमा उल्लेख गर्दछ कि इनबाउन्ड लिङ्कहरूसँग केही उत्साहित र आकर्षक पोष्टहरू प्रकाशित गर्नुहोस् Source .